Cây Hoa Mai Có Bao Nhiêu Loại? | Hatgiongtihon.net - trung tâm cung cấp hạt giống tí hơn
Đang Đọc: Cây Hoa Mai Có Bao Nhiêu Loại? | Hatgiongtihon.net in Hatgiongtihon.net
ZININGAPHI IINTLOBO ZEZITYALO???
Usuku loNyaka omtsha-Thetha malunga neentlobo ezingama-24 zeentyatyambo zeapricot
Ehlabathini, kukho iindidi ezingama-24 zeeapilkosi zentsapho yeeapilkosi, oko kukuthi i-genus Ochna (Ochnaceae) eyahlukileyo kwiintlobo zeapilkosi eziphantse zifane nentyatyambo yepesika.
EVietnam, abantu bahlala besazi ngeentyantyambo zeapilkosi ngokusebenzisa intyatyambo yeapilkosi enamagqabi amahlanu ebizwa ngokuba yi-apricot yehlathi, iapilkosi yendalo okanye iapilkosi yendalo enamagqabi amahlanu kuphela, iintyatyambo ezincinci kunye neziqu ezide. iimitha, ivumba elimnandi liphelile, lisasaza ivumba lenkuni elimnandi kakhulu kwaye lipholile, alinamandla kwaye linesibindi njengezinye iintyatyambo.
Intyatyambo yeapilkosi inombala omhlophe okanye opinki omhlophe, amaphiko amancinci, iipistil ezishinyeneyo nezingqindilili zihlala zikhula zizithungu kunye neentyatyambo ezishinyeneyo, izikhondo ezifana nemithi yeepesika ezityatyambileyo, iinxalenye ezirhabaxa, izahlulo ezigudileyo, umbala oblowu, ulusu olumenyezelayo kwaye zinde kwaye zide njengemithi emidala.
Iintyatyambo zeApricot eVietnam zikhula ngokudumileyo kwimimandla esembindini nakumazantsi, uninzi lwazo, uninzi lweeaprikoti zamahlathi endalo. Kamva, abantu basebenzisa iintlobo ezininzi zeeapilkosi ezibekwe kunye waza wazala uhlobo lweapilkosi eyenziweyo ukuba iapilkosi eneepetali ezininzi, inani lamaphiko linokuba lide ukuya kumakhulu ukuya kumakhulu eepetali ezibekwe phezu komnye. intyatyambo.
Kodwa eneneni, iintyatyambo zeapricot ezityheli kwindalo nazo zineentlobo ezifikelela kwinani eliphezulu kakhulu lamagqabi (ukusuka kwi-12 ukuya kwi-18 petals). I-apricot yendalo inevumba elimnandi kakhulu lendalo kwaye idla ngokutshisa kakhulu ekuseni kwaye ngokuthe ngcembe ilahlekelwa yivumba layo ngexesha lokuphumla kwemini.
Mhlawumbi ngenxa yokuba kusasa, amaqondo obushushu asezantsi, amazolo awakapheli, ngoko ivumba lihlala emoyeni, kude kuphume ilanga, ubushushu bunyuke, kuphele umbethe, kwaye ivumba leentyatyambo nalo lisasazekile. Ngoko sicinga ukuba iintyatyambo zilahlekelwa livumba lazo emva kokuba ilanga liphezulu.
Kukho iintlobo ezili-18 zeentyatyambo zeapilkosi eVietnam ngolu hlobo lulandelayo:
1 – iplum enamanqaku amahlanu: Uhlobo lwe-apricot ephuzi lukhula ngokudumileyo kwingingqi yaseMbindi (ukusuka eDa Nang, iQuang Nam ukuya eKhanh Hoa) kunye nakwiintaba zeTruong Son, kumahlathi amadala. Le yiapilkosi enamacembe amahlanu yendalo eneentyantyambo ezincinci, eziphakathi kunye neentyatyambo ezingenazo zininzi kwaye zixinene njengezinye iintlobo zeapilkosi, kodwa zidubula kancinci.
Kodwa ukuba silahleka kweli hlathi leapilkosi entwasahlobo, siya kubona iintyatyambo eziqaqambileyo ezityheli zehlathi lonke, ummandla weentaba, neentyatyambo eziwileyo, maxa wambi kwanomsinga. Ivumba elimnandi liyangena kwaye lisasazeke kwindawo enkulu. Kwezinye iintaba zeMekong Delta njengaLowo Nyana (iintaba ezisixhenxe) kukho nolu hlobo lweapilkosi kodwa luncinci kwaye luthe saa kwaye alugxininisi.
2-Plum intaba: Kwakhona uhlobo lwe-apricot yehlathi, kodwa kunye nenani elikhulu lamaphiko ukusuka kwi-12 ukuya kwi-18, ngamanye amaxesha nangaphezulu. Le apricot ikhula kwiintaba ezomileyo ezinamatye kwaye ihlala ikakhulu kumbethe, imvula kunye namanzi angaphantsi komhlaba kunye nemozulu efumileyo yeentaba. Olu didi lweapilkosi ludla ngokufumaneka kwiindawo ezisezintabeni zeCentral Highlands naseCambodia.
3-Mayi Nkosi: Kwakhona luhlobo lwe-apricot yehlathi, kodwa isiqu sikhulu kakhulu, iintyatyambo zininzi, amagqabi abanzi, aluhlaza acwebezelayo kwaye anesimo se-serrated. Olu hlobo lweapilkosi luneentyantyambo ezikhula ngokwamaqela amahle, ngoko ke kuthiwa yiapilkosi (igama eliphambili lithetha iqoqo, inani labantu, ukuqokelela, izinto ezixineneyo).
4 – Mai Dong, Mai Se: Ngaba luhlobo lweapilkosi olugxile ekukhuleni kwiindawo ezinesanti emhlophe kufutshane nolwandle. Olu hlobo lweapilkosi lunesiqu esithe tye kwaye singqukuva kunye neentyatyambo ezinqabileyo. Ukuba zinamagqabi amahlanu, zibizwa ngokuba ngoongqatyana, yaye ukuba zinamagqabi angaphezu kwesihlanu, zibizwa ngokuba ziiapilkosi.
Iapilkots kunye neapilkosi zikhula ngokusasazeka ukusuka kumaphondo ukusuka eQuang Binh, Quang Tri ukuya kwiindawo eziselunxwemeni olusembindini kwaye ngamanye amaxesha zifumaneka kwiindunduma zesanti ezimhlophe ezikumazantsi njengeTay Ninh, iDong Nai, iBien Hoa, njl..
5-Iapilkosi zithunyelwe, Mai Pi Ba, Mai Vuong: Njengodidi lweapilkosi oluhlala kweminye imithi, ingakumbi imithi emidala emikhulu, zihlala esiqwini, ngokuyinxenye zifunxa izondlo emhlabeni, ngokuyinxenye zifunxa izondlo kwimithi ezibambelele kuyo.
Ngokungafaniyo nezinye iintlobo zeeapilkosi, ezibambelela kuphela kwisiqu seminye imithi, iiapilkosi zihlala isiqingatha-ngokuxhomekeke kwiingcambu zazo ezibambelele emhlabeni. Iiapilkots zinomzimba orhabaxa, oqinileyo kwaye orhabaxa onamathumba angaqhelekanga. Amathupha kunye nerhizomes kunye neentyatyambo ziyaphuma kuloo mathumba. Iintyatyambo zidubula kakhulu kwaye zixinene ngokwamaqela ashinyeneyo. Ezinye iindawo zikwayibiza ngokuba yiMai Bì okanye iMai Vuong.
6 – Iapilkosi, iapilkosi enevumba elimnandi okanye iapilkosi: Ngaba luhlobo lweapilkosi etyheli enevumba elimnandi kakhulu, elivumba elimnandi kunazo zonke ezinye iintlobo zeapilkosi. Ivumba layo likhethekileyo kwaye mhlawumbi linamandla ngaphezu kwazo zonke iintlobo zeapilkosi, ngoko ibizwa ngokuba ngumthi weapilkosi ngenxa yohlobo olukhethekileyo lolu hlobo lweapilkosi enamagqabi amahlanu.
E Ben Tre, kukho kwakhona ezininzi iintlobo zale apricot ukuba abantu balapha bayibiza kakhulu igama egadini, “iapilkosi elimnandi” kuba livumba elimnandi kakhulu, elimnandi ngaphezu kwesiqhelo Iapilkosi ukuba abantu baseMzantsi badla ngokudibana. E-Hue, olu hlobo lweapilkosi lukwaziwa njenge “Pi Ngu” kuba ikhuliswa ebhotwe kwaye ithandwa yiRoyal Family njengesipho sodidi oluphezulu, kungoko ibizwa ngokuba yi “Pi Ngu”.
7 – Mai Chau (Inyathi yeApricot): Njenge-apricot enkulu eneentyatyambo, iintyatyambo zolu hlobo lweapilkosi zinkulu ngokungaqhelekanga, zinamaphiko amakhulu nabanzi, atyheli aqaqambileyo. Intyatyambo nganye inobubanzi obungaphezulu kwe-5cm, ngoko ke abantu bayibiza ngenyathi iapilkosi, abantu basemaZantsi badla ngokuyifunda ngokuthi “mai Chau”.
8 – Plum willow: Luhlobo lweapilkosi enamasebe athambe kakhulu najingayo okomthi womngcunube, neentyatyambo ezimbalwa kakhulu. Amagqabi eApricot atsolile kwaye amancinci, asonde njengamagqabi omngcunube, ngoko kuthiwa yi-apricot willow.
9 – Iapilkosi etsolo: Njengohlobo lwe-apricot enamagqabi amade kunye namaqabunga, iintyatyambo zeentyatyambo kunye namaqabunga nazo zinemilo efanayo.
10 – Mai Ca Na: Uhlobo oluqhelekileyo lwe-apricot olukhula kwindawo yaseCa Na yolwandle kwiphondo laseNinh Thuan. Olu hlobo lwe-apricot inomzimba omncinci, obuthathaka, amasebe anqabileyo kakhulu, kulula ukuwaphula, amaqabunga a-oval, agudileyo kwaye ajikeleza emaphethelweni. Abantu balapha bayibiza ngokuba yiCa Na apricot.
11-Mai Vinh Hao: Kwintsimi yephondo laseBinh Thuan, kwisithili saseTuy Phong, iVinh Hao commune, apho owona mthombo wamanzi amaminerali endalo eVietnam “yiVinh Hao yamanzi amaminerali”, kukho olunye uhlobo lweapilkosi etyheli ekwaluhlobo oluqhelekileyo lwamanzi. Le nto ayahlukanga kangako kwiCa Na mai kodwa ithiywe ngabantu balapha emva kwendawo ehlala kuyo, “Mai Vinh Hao”. I-Mai Vinh Hao inesiqu esiqinileyo, amagqabi amancinci, iintyatyambo ezinkulu kunye neflethi, ngakumbi ixesha elide.
I-12 – ikota yeAprikoti: Iintlobo ze-apricot ziqhelekile kwingingqi yaseMazantsi. Le apricot iphinda iqhakaze ngeentyantyambo ezityheli, kodwa emva kokuwa kwamagqabi, i-sepals ishiywe ngamacembe amahlanu abomvu aneepistils kunye neembewu ezintathu ezimnyama njengee-ertyisi. Amagqabi amahlanu abomvu nawo angqukuva kwaye amile okwentyatyambo yeapilkosi.
Ngenxa yobume bokudumba kabini kwintyatyambo enye, abantu bakwabiza iaprikoti yequartet njengenqanaba lesibini leapilkosi. Le ntyatyambo i-apricot iqhuma ngokukhawuleza unyaka wonke, ngoko ibizwa ngokuba yi-apricot yekota yesine (intwasahlobo, ihlobo, ekwindla, ubusika bonke bayaqhakaza). Umzimba weeapilkosi ezine ezibalaseleyo urhabaxa kwaye umnyama. Kukho imithi ekhula ibe mikhulu kwaye ibe mide, kodwa uninzi lwayo luhlala ixesha elide. Ijongeka indala, kokukhona indala kwaye iqinisekile.
13 – Mai Giao: Luhlobo lweapilkosi enamaphiko amaninzi adityaniswe kwiindidi ezininzi ezahlukeneyo zemithi yeapilkosi kumthi omnye weapilkosi. U-Mai Giao uthatha ingcambu yeapilkosi engundoqo emthubi, aze afakele amasebe ezinye iintlobo zemithi yeapilkosi ukuze azale uhlobo lweapilkosi enamaphiko amaninzi nemibala emininzi kumthi weapilkosi omnye. Olu hlobo luhlobo lwe-apricot yokwenziwa esiyibona kakhulu namhlanje kwiimarike zeapilkosi.
Iintlobo ezi-6 zeeapilkosi ehlabathini:
1 – Iapricothi yeKhambodiya yeGolide (eKhambodiya) Igama lezenzululwazi nguOchna integerrima. Iintyatyambo zeapilkosi zineepetali ezi-5 ukuya kwi-9, xa zidubula, zijika zijonge ezantsi ngakwisiqu seentyatyambo, azinwenweli njengeeapilkosi zaseVietnam, iintyatyambo ziba tyheli oluluthuthu (umnyama uphantse wamnyama orenji). Olu hlobo lweapilkosi lukwafumaneka naseVietnam, ubukhulu becala lukhula kumahlathi akuMzantsi nakuMbindi.
Zizityalo zasendle ezithi zisasazwe kwezinye iindunduma ezishushu nakwiindonga zemilambo ezinomthunzi. Iapilkosi etyheli yaseCambodia ikwimo yomthi, obhityileyo, obhityileyo kunye namasebe amade. Amagqabi anombala oluhlaza okhanyayo kwaye akhazimlayo, asasazwa kancinci emasebeni, aneencam ezincinci ezinqamlezileyo.
Iintyatyambo zikhula kwii-axils zamagqabi zibe zizikhonkwane, izikhondo zeentyatyambo ezimfutshane, iisepal eziluhlaza ezimenyezelayo kwaye aziwagqumi amathupha. EVietnam, abantu bahlala besebenzisa olu hlobo lweapilkosi ukumilisela kwiapilkosi kuba inamandla okwandisa amaphiko phezulu. Akunjalo kuphela, kodwa ngoku sele inemibala emithathu ngenxa ye-hybridization: obomvu, ophuzi kunye nomhlophe.
2 – Iapilkosi emthubi yaseMzantsi Afrika: Kukho malunga ne-12 iintlobo zeeapilkosi ze-Ochna, eziquka zombini iicycad kunye nezihlahla. apho kukho iindidi ezimbini eziqhelekileyo, i-Ochna pretoriensis kunye ne-Ochna pulchra. Ezi ntlobo zimbini zifumaneka kakhulu kwingingqi yaseKoppie.
Iintlobo ze-Ochna pulchra zi malunga ne-37m ukuphakama, i-bark ihlala ikhupha, amaqabunga awela ngokulula. Zikhula endle ehlathini, ixolo elingwevu, rhabaxa kwisiseko, i-square cream peeled trank. Iapilkosi yaseAfrika inemibala emibini etyheli kunye nepinki. Ukongezelela, eMzantsi Afrika, kukho iindidi zeeapilkosi ezifana kakhulu neekota ezine zeapilkosi eVietnam.
3 – Myanmar Golden Apricot (eBurma): Kweli lizwe lamaBhuda, kukho uhlobo lweapilkosi enegama lenzululwazi elithi Ochna serrulata, elifana neapilkosi yaseMzantsi Afrika. Nangona kunjalo, uhlobo lweentyatyambo zeapilkosi luhluke kancinane kuba iipetali zisicaba okanye zine-ovary ebomvu njenge-apricot yequartet, ehlala ixesha elide ngaphambi kokuwa ngokupheleleyo.
4 – Iapilkosi etyheli yaseIndonesia: Igama lezenzululwazi nguOchna kirkii Oliv, Ochna serrulata. Zonke zivela eAfrika, kodwa ngenxa ye-geology eyahlukeneyo, zinenkangeleko enkulu kuneeapilkosi zaseAfrika. Kukho iintlobo ezidubula entlakohlaza, ehlotyeni okanye kuwo onke amaxesha onyaka afana neapilkosi.
5 – Iapilkosi etyheli yaseMadagascar: Ngaba luhlobo lweapilkosi enegama lenzululwazi yiOchna greveanum enamagqabi amahlanu angqukuva, ashwabeneyo ecaleni komphetho wephiko njengeapilkosi eVietnam, amagqabi amade kunye ajingayo.
6 – Iapilkosi etyheli yaseAfrika: Yohlukile eMzantsi Afrika iapilkosi emthubi kuba ifana neapilkosi yaseVietnam enamagqabi amahlanu, kodwa inelinye igama lezenzululwazi, iOchna thomasiana, yeyesihlahla esi, amagqabi ambhoxo, atsolo natsolo amagqabi amalunga ne-10cm ubude. Iintyatyambo zidubula emasebeni entlakohlaza, kodwa ngamanye amaxesha zidubula ngokukhawuleza ehlotyeni kodwa zincinci ngenani. Amagqabi amalunga ne-2cm ubude, i-calyx iyanda kwaye ibe yi-burgundy, ngaphakathi kukho isiqhamo esincinci esiluhlaza njenge-apricot yaseVietnam.
Ezi ziintlobo ze-19 zeeapilkosi zaseVietnam kunye nehlabathi, apho i-4, i-6 kunye ne-7 iintlobo zinamagama ahlukeneyo asixhenxe ngokwemveli yaseVietnam. Lilonke, kukho iindidi ezingama-24 zeeapilkosi ehlabathini lonke okanye nangaphezulu.
Kuyinyani ukuba iintyatyambo zeapricot zihluke kakhulu kwaye zizityebi kwiintlobo. E-China, basabiza umthi wepesika umthi weapilkosi kuba kukho iintlobo ezininzi ezifanayo kakhulu kwiintyatyambo zeapilkosi, ngakumbi ipesika epinki kunye nepesika emhlophe, abadla ngokuyibiza ngokuba yirose apricot kunye ne-mai emhlophe, kodwa iipetali zeapilkosi zingqukuva kwaye zincinci njengepesika. iipetals, kunye nepistil ixinene kwaye ngqindilili, isiqu sifana ncam nomthi wepesika, kungoko ibizwa ngokuba yipesika, hayi iapilkosi.
UTet uthetha ngobuninzi bemithi yeapilkosi ukuze sifunde ngentyatyambo eqhelekileyo yalo mthombo. Intyatyambo yeApricot isisimboli sethamsanqa, ithamsanqa, isiqalo esigqibeleleyo nesinempumelelo kunyaka omtsha. Iintyatyambo zeApricot nazo zinentsingiselo yokuphelisa ububi kunye nezinto ezimbi ngonyaka woxolo, ulonwabo kunye nokuchuma.
Ngokutsho kwephephandaba le-Education-Time
3 loại hoa ly trồng phổ biến | Hatgiongtihon.net